बजेट बालुवाको महल नबनोस् भ्यू टावरको बजेट कटौती गरौँ
भागवत भट्टराई काठमाडौं, २३ वैशाख
सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तीव्र तयारीमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २६ वैशाखमा बजेट अधिवेशन आह्‍वान गरिसकेकी छन् ।
परिवर्तित आवश्‍यकता र अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेछ । कोभिड- १९ र त्यससँग जुध्नका लागि लिइएको नीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा स्रोतको चाप बढे पनि बजेटको माग बढेको जनाएको छ । अर्थविद्हरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छरितो र सानो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिए पनि अर्थ मन्त्रालय भने चालू वर्षको तुलनामा बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा शिलापत्रकर्मी भागवत भट्टराईले पूर्वअर्थसचिव रामेश्‍वर खनालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हामी अहिले असामान्य अवस्थामा पनि छौँ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ला ?
हामी बजेटको असमान्य र असाधारण अवस्थमा छौँ । नेपाल सरकाको वित्तीय दायरा अलिक साँघुरो भएको छ । राजस्व घटेको छ र राजस्व आगामी ५-६ महिनाको अवधिमा बढ्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसले गर्दा यो परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आकर्षक, ग्ल्यामर्स जस्तै: भ्यू टावर जस्ता तत्कालका लागि अनावश्‍यक फजुल खर्चका आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम कटाएर अथवा विनियोजनमा हटाएर कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण सिर्जना भएको परिस्थितिलाई सामना गर्नका निमित्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
विषयगत रूपमा राहत कार्यक्रम केही समयसम्म ल्याउनुपर्ने देखिएको छ किनभने जसले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नुपर्‍यो, रोजगारीको अवसर गुमाउनुपर्‍यो, उनीहरूलाई लकडाउन सकिएपछि पनि केही समयसम्म राहत दिइरहनुपर्ने हुन्छ । बन्द भएका साना घरले मझौला वा ठूला उद्योगहरू सङ्कटमा रहेका छन् ।उनीहरूलाई पुनर्उत्थान गर्नका लागि पनि कतिपय गैरमौद्रिक, गैरबजेटरी नीतिबाट सहयोग गर्नुपर्नेछ भने कतिपय बजेटरी नीतिबाट पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ (पैसा नै विनियोजन गर्न आवश्‍यक छ) ।
अहिले धेरै मानिसहरू शहरबाट गाँउतर्फ फर्किए । त्यसैगरी विदेशमा काम गर्न गएका युवाहरू नेपालमा फर्कने सम्भावना उच्च देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गएको, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति कमजोर बन्दै गएको हुनाले सबै रोजगारी सुरक्षित पक्कै हुँदैन । त्यसमध्येका १५-२० प्रतिशत फर्कन्छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ ५ देखि ७ लाखसम्म नेपाली काम गर्न गएका थिए, उनीहरू फर्किन सक्छन् ।
मुलुकभित्र पनि करिब १० लाख मानिसहरू शहर छाडेर गाउँमा गएका छन् । उनीहरू फेरि फर्किएर शहरमा रोजगारी खोज्न समय लाग्छ । त्यसबीचमा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न लागियो भने त्यसले २ वटा काम गर्न सक्छ ।
विपन्न वर्गहरू जहिले पनि शहरतिर तानिने, शहरले शोषण गर्ने । आर्थिक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा त्यही नै रोजगारी सिर्जना गरेर स्थायी आर्थिक गतिविधि गर्न थालियो भने समानुपातिक आर्थिक विकास पनि हुन्छ । त्यही भएर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम दोस्रो महत्त्वपूर्ण हो ।
तेस्रो, स्वास्थ्यको पूर्वाधार हाम्रो ज्यादै कमजोर देखियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलना गर्दाखेरी पनि नेपाल जस्तै मुलुकका स्वास्थ्य पूर्वाधारभन्दा हाम्रो कमजोर रहेछ । हाम्रो अस्पतालको शय्या संख्या आईसीयूको शय्या संख्या आपतकालीन अवस्था दिनुपर्ने क्षमता, त्यो सबै कमजोर रहेको अवस्थामा कोभिड- १९ को संक्रमणलाईसमेत मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसमा बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेको कृषि हो । तर, कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नका निमित्त, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका निमित्त विगतको तयारीले पुगेन, त्यो प्रयास सही पनि थिएन, त्यसमा बजेटको ध्यान पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
गाउँमा बेरोजगारी बढ्ने देखियो । बेरोजगारलाई रोजगारी दिन वा स्वरोजगार बनाउन हाम्रा केही संरचना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम पनि छन् । यिनै कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति छ कि अन्य कार्यक्रम आवश्‍यक पर्ला ?
यिनै कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका निमित्त र ग्रामीण क्षेत्र बसोवासयोग्य बनाउनको निमित्त चाहिने पूर्वाधारमा काम गर्ने गरी यी कार्यक्रमहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरियो भने धेरै ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।
विगतमा जसरी चालू खर्च प्रकृतिको एक पटक काम गरेपछि पटक पटक गरिरहनुपर्ने, त्यस्तो बजेट खर्चंदा पूर्वाधार सिर्जना हुँदैन । ग्रामीण पूर्वाधार सिर्जना गर्ने कामको निमित्त रोजगारी पनि सिर्जना हुने र खासगरी यन्त्र लगाएर गर्ने कामभन्दा बढी मात्रामा श्रमप्रधान कामहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले तत्काल रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ र दीर्घकालसम्मका लागि पूर्वाधार पनि निर्माण गर्छ ।
त्यस्तो कार्यक्रममा लैजानुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम यिनै हुन्, त्यसको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार आफैँ बजेट विनियोजन गरेर केन्द्रित हुने वा निजी क्षेत्रसँग पार्टनरसिप गर्ने ?
बजेटबाट जाने कुरा सरकार आफैँले गर्ने काम भए । तर, सरकार आफैँले काम गर्ने भन्दाभन्दै पनि त्यसमा विभिन्न भूमिकामा निजी क्षेत्र हुन्छ । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले सामाग्री आपूर्ति गर्ला, कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले ठेकेदारको रूपमा प्रस्तुत होला, कतिपय अवस्थामा समानान्तर काम गर्ला, निजी क्षेको भूमिका त रहन्छ तर प्राथमिक भूमिका भनेको सरकारको रहने हो ।
हामीले १५औँ पञ्चवर्षीय आयोजनाबाट रणनीतिक आयोजना पनि छुट्याएका छौँ, गौरवका आयोजना पनि छन् । यी कार्यक्रमलाई अहिले स्रोत जुटाएर अघि बढ्ने सम्भावना कति छ ?
ठूला आयोजनाका पनि २ वटा प्रकृति हुन्छन् । एउटा, ग्ल्यामरस, हेर्दा पनि झलक्क राम्रो देखिने, जस्तै: मेट्रो रेल, भ्यू टावर भनेजस्तो कुनै ठाउँमा २ लेनको सडक छ भने ४ लेनको बनाउने भनेजस्तो । तीचाहिँ हामीलाई गर्व गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालमा यस्तो पूर्वाधार छ भनेर देखाउनका लागि पनि राम्रो होलान् तर त्यस्ता किसिमका राम्रा आयोजना अहिले आवश्‍यक होइन ।
अर्को, ठूलो आयोजना हुन्छ, जो राष्ट्रिय रणनीतिक महत्त्व भएका हुन्छन् । त्यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकले ठूलो लाभ पाउँछ । जस्तै: माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकी आयोजना, पूर्व-पश्‍चिम प्रसारण लाइन, द्रुतमार्ग । यी रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू हुन् । यी आयोजना जारी हनुपर्छ ।
जुन ग्ल्यामरस छन्, अहिलेको प्राथमकिता होइनन् ती । भविष्यमा पर्याप्त मात्रामा राजस्व हुँदाखेरी अघि बढाउँदा होला । त्यस कारण भ्यू टावर बनाउन अथावा अन्य अग्ला बिल्डिङ बनाउनेजस्ता प्राथमकितामा राखिनुहँदैन ।
अनावश्‍यक खर्च बढी भयो भनेर सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । बजेटमा स्रोत पनि अभाव भएको सन्दर्भमा हामीले यस्तो खर्च कटाएर कति रकम जोगाउन सक्छौँ होला ?
चालू खर्चमा संस्था सञ्चालन गर्नका निमित्त तलबभत्तालगायतको खर्चमा कटौती गर्न सक्दैनौँ । शिक्षाको कटौती गर्न सक्दैनौँ, स्वास्थ्यमा कटौती गर्न सक्दैनौँ । यो तलबभत्तामा कटौती गर्ने सम्भावना छैन । कटौती गर्ने सम्भावना भनेको पुँजीगत खर्चमा बढी मात्रामा हुन्छ । त्यसमध्येमा पनि नेपाल सरकार स्वय‌ंले सञ्चालन गरेका कामहरू हो ।
दातृ निकायले सहयोग गरेको आयोजनामा कटौती गर्छु भन्यो भने त्यो रकम पनि गुम्छ, आयोजना पनि गुम्छ । त्यही भएर नेपाल सरकार स्वयंले सञ्चालन गरेका त्यस्ता पुँजीगत विकास प्रकृतिका खर्चहरू कसैलाई केही समय थातीँ राख्न सकिन्छ । जस्तो: संसद विकास कोषको रकम निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रम ग्ल्यामरस आयोजनाबाट निकाल्न सकिन्छ । रकमै निकाल्न सकिने आकार ज्यादै ठूलो छैन । त्यो सबै कुरा गर्दागर्दै पनि ४०-५० अर्ब रुपैयाँसम्म त्यहाँबाट निकाल्न सकिएला ।
सामाजिक क्षेत्रमा सकिएला एक पटक दिनु भनेको पैसा जेष्ठ नागरिक भत्ता अथवा सुत्केरी भत्ता भन्नेजस्ता कुरा घटाउन सकदैन । हाम्रो बेजेटको आकार तुलनात्मक रूपमा ठूलो हो किन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४०-४५ प्रतिशतमाथिको रकम बजेमा ल्याउने गरेको छ । त्यसको एउटा हिस्सा वैदेशिक सहयोग पनि हो । वैदेशिक सहयोगको चालू खर्च सबै सीमा हेर्दा ४०-५० अर्ब रुपैयाँसम्म निकाल्न सकिएला ।
जति कटौती गरे पनि अर्थ मन्त्रालय १६ खर्ब रुपैयाँमाथिको बजेट ल्याउने तयारीमा देखिन्छ । स्रोतको चुनौती कति देख्नुहुन्छ ?
१६ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउन निकै गाह्रो छ । बालुवाको महल बनाए जस्तो कल्पना गरेर बजेटमा राख्नु अलग कुरा हो । १६ खर्ब भनेको अहिलेको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ प्रतिशतमाथिको आकार हो ।
अहिले आकार महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, अहिले परिणाम महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीलाई परिणाम हासिल गर्न १३ खर्ब रुपैयाँको बजेटले पुग्छ भने १३ अर्ब नै ल्याउनु ठीक हो ।
अहिलेको परिणाम भनेको आर्थिक गतिविधिको पुनर्उत्थान हो । स्वरोजगार सिर्जना हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार राम्रो बनाउने हो । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि हो । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना होस्, यी हाम्रा प्राथमकिता हुन् ।
यी प्रथामिकता हासिल गर्नका निमित्त १४ खर्ब रुपैयाँले पुग्छ भने त्यति नै ल्याउने हो । अन्य सालमा रकम महत्त्वपूर्ण हुने थियो होला, अहिले परिणाममुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । अर्को, जतिसुकै ठूलो बजेट र ठूला आयोजना भए पनि कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन भने नल्याएको बेस । यस कारण कार्यान्वयन क्षमतालाई पनि हेरेर सम्पन्न गर्न सक्ने, सम्पादन गर्न सक्ने आकारको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २३, २०७७, १६:३२:००